Ebe ọ bụ na m si Mac, anyị chọrọ ka unu niile nwee obi ụtọ na afọ ọhụrụ 2017! | Esi m mac
Ebe ọ bụ na m si Mac, anyị chọrọ ka unu niile nwee obi ụtọ na afọ ọhụrụ 2017!
Dị ka aha nke post a na-ekwu, ebe m si Mac, anyị chọrọ ka unu niile nwee obi ụtọ na afọ ọhụrụ. Nke a abụrụla ezigbo afọ kpụ ọkụ n'ọnụ n'ihe gbasara akụkọ ụlọ ọrụ apple apụl, n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na on Mac na-atụ anya na-abata ọzọ na mma n'oge afọ 2017 na anyị hapụ taa.
Apple bụ ụlọ ọrụ dị mkpa maka ndị na-eso Mac na ndị niile na-eso ụzọ ma ọ bụ ndị ọrụ nwere ngwaahịa ọ bụla, anyị nwere olile anya na 2017 a ga-abụ afọ ka mma na nke kachasị elu karịa akụkọ gbasara Mac na gịnị kpatara ya, na sistemụ macOS na-abịa.
Ke ofụri ofụri, ọ bụ banyere ụtọ nke ngwaahịa ha nwere na Macs na mgbe ahụ kọọrọ unu niile akụkọ, asịrị na ahụmịhe. M si Mac abụghị ihe ọ bụla karịa njikọ dị n'etiti ndị ọrụ niile nke ngwaahịa ha na ọkachasị nke Mac, yabụ anyị nwere olile anya ịga n'ihu na-abawanye n'ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ ya ka ozi niile wee ruo ọtụtụ mmadụ.
Taa bụ ụbọchị pụrụ iche nye onye ọ bụla ma ị ga-anụrịrị awa ndị mbụ nke afọ a wee mejupụta akwụkwọ ndetu gị na ndepụta nke ebumnuche ndị a ga-arụ na wepụtara ọhụrụ 2017. Ya mere, ndị otu Soy de Mac niile chọrọ M na-achọ gị niile a Obi ụtọ na New Year 2017 na-atụ anya na gị niile na nrọ-emezu na nke a afọ ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ebe ọ bụ na m si Mac, anyị chọrọ ka unu niile nwee obi ụtọ na afọ ọhụrụ 2017!
Ezi afọ ọhụrụ nye mmadụ niile
Zaghachi David Sanz
Daybọchị mbụ nke afọ 2017 na ebe a ka anyị hapụụrụ gị izu kachasị mma na m sitere na Mac
Foxconn na-ezube iwepụ ndị ọrụ ya ma were osisi rụọ ọrụ